“Geeska Afrika waxaa weli ka taagan colaad aan la soo af-jarin oo ah qabyaaladda Soomaalida”… siyaasi Duur | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Geeska Afrika waxaa weli ka taagan colaad aan la soo af-jarin oo ah qabyaaladda Soomaalida”… siyaasi Duur
Hargaysa (SDWO): Siyaasi Maxamed Nuur Caraale (Duur), ayaa sheegay in qabyaaladda kala qaybisay guud ahaan bulsho weynta Soomaaliyeed 70% ay ka dhex jirto dadka reer Somaliland, taasoo uu ayaan darro weyn ku tilmaamay.
Maxamed Nuur Caraale, waxa uu tilmaamay in qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta ka dhex jirta bulshadda Somaliland ay u baahan tahay in la hello cidii Somaliland ka caawin lahayd xalinta arrintaasi.
Siyaasi Duur, oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa tusaale u soo qaatay isbedeladda balaadhan iyo dhamaystirka colaadihii gaamuray ee Geeska Afrika muddo qarniyo ah ka taagnaa iyo siday ay xiligan la joogo Somaliland meel sare uga taagan tahay qabyaaladu.
Duur oo ka hadlayay isbedeladda Geeska Afrika ka socda waxa uu yidhi “Geeska Afrika isbedello badan ayaa ka dhacay. Wixii colaad Geeska Afrika taallay waa la soo af-jaray. Itoobiya wixii kala qaybsanaan, qowmiyado iyo diimo wixii dhex yaalay boqolka milyan ee Itoobiyaanka ah waa la soo af-jaray.
Sidoo kale colaadii Itoobiya iyo Erithteria u dhaxaysay waa la soo af-jaray. Colaadii u dhaxaysay Jabuuti iyo Erithteria iyana way socotaa”.
Waxaanu intaas ku daray “Geeska Afrika weli waxaa ka taagan colaad aan la soo af-jarin, waana qabyaaladda Soomaalida. Wixii kaloo dhan waa la xaliyay, balse waxa keliya ee aan weli la xalinin waxa weeye qaybsanida iyo qabyaaladda macno daradda ku salaysan ee Soomaalida.
Qabyaaladda Soomaalida na markaan eegay 70% (boqolkiiba todobaatan) Somaliland ayay taallaa. Sodonka kale bulshooyinka kale ayay dhex taalaa”ayuu yidhi Duur oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargaysa.
Geesta kale Maxamed Nuur Caraale, ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay qabyaaladda ka jirta Somaliland iyo sida aan weli xal loogu helin.
Waxaanu yidhi “Aad ayay nasiib darro weyn u tahay arrintaasi. Waxaanan u baahan nahay dhibaatadaas cidii inala xalin lahayd, ee inagala shaqayn lahayn ayaynu u baahan nahay in aynu doonno”.